Outliers: Ny tantaran'ny fahombiazana | Martech Zone
Alatsinainy, May 4, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha niandry ny sidina omaly, Tadidiko ireo zavatra roa hadinoko - ny palitao fanatanjahan-tena sy ny iray amin'ireo boky ao amiko hovakiana antontany.
Soa ihany, ny fivarotana teo am-bavahadiko dia nisafidy boky voafantina ary Outliers: Ny tantara mankany amin'ny fahombiazana, by Malcolm gladwell, dia teo. Tena mpankafy an'i Malcolm Gladwell aho - na ao amin'ny lahatsoratr'i New Yorker na ao amin'ny bokiny. On Gladwell, Orinasa haingana nanoratra hoe:
Tsy nisy olona tamin'ny fahatsiarovana vao tsy ela akory izay niditra an-tsehatra tamin'ny andraikitry ny mpitarika eritreritra ara-barotra toa an'i Gladwell. Fotoana fohy taorian'ny boky voalohany, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference (Little, Brown, 2000), latsaka tao an-tànan'ny America, i Gladwell dia nanao ny dingana avy amin'ny mpanoratra ny jeneraly ao amin'ny The New Yorker ho andriamanitra marketing.
Ny marketing dia tsy resaka marketing. Momba ny fahombiazana. Malcolm Gladwell dia mpanoratra tantara mahatalanjona - ary mizara tantara tsy mampino, tsy manam-paharoa, misy ny tsy fanao amin'ny tantaran'ireo izay mahomby izy. Ny boky dia manondro toe-javatra izay nilahatra tsotra izao ny toe-javatra mba hahombiazana, manontany ny vintana tafiditra amin'izany, ary manohana ny fiezahana mafy - indrindra - ora maro (10,000) no mety hitarika ny ankamaroan'ny olona hanana fahaizana.
Ny sasany amin'ireo tantara tsy manam-paharoa… nahoana ny mpilalao hockey matihanina no teraka tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona? Fa maninona ny aziatika no mahay matematika? Ahoana no ifandraisan'ny IQ amin'ny fahombiazana? Fa maninona ny Southerners no miady haingana? Ahoana no nitana andraikitra lehibe tamin'ny foko isan'ny lozam-piaramanidina Koreana taona maro lasa izay? Ahoana no fomba hanovan'ny fomba fampianarana maoderina ny fahafahan'ny zanakay hahita fahombiazana?
Ny moraly ao amin'ny boky dia tsara. izahay afaka mitaona ny fahombiazan'ny olona amin'ny alàlan'ny fanovana ny tontolo iainana onenan'izy ireo, iasany sy ilalaovany. Gladwell dia manome ny fianakaviany ho ohatra tsara… miresaka ny fahafoizan-tena izay nanampy ny olona iray tamin'ny fiainam-pianakaviany ary nanova mandrakizay ny ho avy sy ny fahombiazan'i Gladwell tenany.
Tiako ireo boky izay manohitra ny lojika sy ny toe-piainana. Ity dia zavatra tiako indrindra Gladwell. Nopotehiko ity boky ity ary ankehitriny dia mila mitady zavatra hovakiana eny an-dalana mody aho!
Tags: afon-dasyCapsuleCRMSMS misambotrafampiharana iphone cmsfikarohana iraisam-pirenenafampiharana iphone
Ny Acrylic Times dia manambatra kanto ireo gazety sy RSS
May 4, 2009 ao amin'ny 5: 22 PM
May 4, 2009 ao amin'ny 7: 47 PM
May 5, 2009 amin'ny 8: 50 AM
May 5, 2009 amin'ny 11: 16 AM
May 6, 2009 amin'ny 8: 43 AM
May 7, 2009 amin'ny 12: 19 AM
24 Aogositra 2009 à 3:53